Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင် ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင် ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင် ရောဂါ)
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါဆိုသည်မှာ နှလုံးတွင်ရှိသော အဆို့ရှင်သည် သူ၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ခြင်းဖြစ်တယ်။ နှလုံးတွင် အဆို့ရှင် လေးခုရှိပါတယ်။ ထိုအဆို့ရှင်များသည် သွေးများကို မှန်ကန်စွာစီးဆင်းနိုင်စေရန် အထောက်အကူပေးပါတယ်။ နှလုံးတစ်ချက်ခုန်တိုင်း အဆို့ရှင်များသည် အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးပါတယ်။
အဆို့ရှင်များ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ဆောင်မှု မမှန်သောအခါ သွေးစီးဆင်းမှုကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါတွင် ၎င်းနှင့်ပတ်သတ်သောအရာအားလုံး(ဥပမာ- လည်ပင်းသွေးလွှတ်ကြောမကြီးကျဉ်းခြင်း) ပါဝင်တယ်။ ဒါ့အပြင် နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ သွေးတိုးရောဂါ နှလုံးပျက်ဆီးခြင်း တို့ကိုလည်း ဖြစ်စေနိင်ပါတယ်။
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါဟာ မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆို ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အသက်ကြီးသူများတွင် ပိုအဖြစ်များတာတွေ့ရတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော အချက်များကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ရောဂါကိုကာကွယ်ကုသနိုင်ပါတယ်။ ပိုသိလိုသောအချက်များ ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါလက္ခဏာများစွာရှိပါတယ်။
ယင်းတို့အနက် အတွေ့ရများသော လက္ခဏာများမှာ…
• ရင်ဘက်အောင့်ခြင်း သို့ မအီမသာဖြစ်ခြင်း
• မူးဝေခြင်း သို့ အားနည်းခြင်း
• ခန္ဒါကိုယ်အတွင်းရှိရေကိုဆွဲယူခြင်း(ခြေထောက်များနှင့် ဝမ်းဗိုက်ကိုဖောယောင်စေသည်)
• ခြေကျင်းဝတ်၊ ခြေဖမိုး သို့ ဝမ်းဗိုက် ဖောယောင်ခြင်း
နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါလက္ခဏာများစွာရှိပါတယ်။ ယင်းတို့အနက် အတွေ့ရများသော လက္ခဏာများမှာ…
အထက်မှာဖော်ပြထားတာတွေမှာ မပါတဲ့ တချို့ရောဂါလက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အကယ်၍ရောဂါ လက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ထံမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
တချို့သောနှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါများဟာ မွေးရာပါဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် တခါတရံတွင် ကျန်းမာရေးပြသနာများကြောင့်လည်း ရောဂါဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ ဖြစ်ပွားစေသော အခြေအနေတချို့မှာ…
• လေးဘက်နာရောဂါ( Streptococcus ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော အဆစ်ရောင်ရောဂါ)
• Mitral valve ရှိ တွယ်ဆက်ကြွက်သားများယောင်ခြင်း
• အရေပြားယောင်သည့်ရောဂါ(ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေသည့်နာတာရှည် ရောဂါတစ်မျိုး)
• နှလုံးသွေးကြော၌ ဖြစ်တတ်သည့်ရောဂါတစ်မျိုး
• တွယ်ဆက်ကြွက်သားများ ယောင်ယမ်းသည့်ရောဂါ
• တချို့သောဆေးများနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်များ စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
• နှလုံးရောဂါရှိသူများ( နှလုံးကြွက်သားယောင်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေးဘက်နာရောဂါ)
• တချို့ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးများ
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ သင့်နှလုံးခုန်သံကို နားကြပ်ဖြင့်နားထောင်ခြင်းဖြင့် သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းနှင့် ပက်သတ်၍ နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ရောဂါရှာဖွေသောစက်များ၊ သွေးစစ်ဆေးခြင်းများဖြင့်လည်း နှလုံးအဆို့ရှင်ကိုစစ်ဆေးပြီး သင့်တော်သော ကုသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်။
သင်၏နှလုံး အရွယ်အစား၊ ပုံစံအနေအထားတို့ကို သိနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါဟာ တခါတရံ နှလုံးကြီးစေနိုင်ပါတယ်။
• Echocardiography :
အသံလှိုင်း( ultrasound wave) ကို အသုံးပြု၍ နှလုံးနှင့် သွေးကြောများ၏ ပုံစံကို ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။
• နှလုံးသွေးကြောထဲသို့ ပြွန်ထည့်၍ သွေးစီးဆင်းမှုပုံမှန် မမှန် နှင့် နှလုံးအဆို့ရှင် ပြသနာရှိ မရှိလေ့လာခြင်း
Heart Valve Disease (နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သင့်တော်သော ကုသမှုကိုလမ်းညွှန်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ တိကျသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူသင့်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဖြစ်ပါက ဆေးလိပ်ဖြတ်ရပါမယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအသောက်များ စားရပါမယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးများကို တိကျစွာသောက်ရမယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် သွေးပုံမှန်စီးရန်အတွက် beta-blocker ၊ Ca channel blocker.တို့အပြင် သွေးကြောကို ပွင့်စေရန်နဲ့ ကျယ်စေရန်အတွက် သွေးကြောကျယ်ဆေး၊ ဆီးဆေးများလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုများတွင် ကိုယ်ပိုင်ကြွက်သားဖြင့် အဆို့ရှင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များမှ အဆို့ရှင်များကို ယူ၍ အဆို့ရှင်အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အလှူရှင်ဆီမှ အဆို့ရှင်ဖြင့် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးအဆို့ရှင် အတု (သို့) စက်ဖြင့် အစားထိုးခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။
Heart valve disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart- valve-disease/basics/definition/con-20036065. Accessed July 9, 2016.
Testing for Heart Valve Problems.
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/HeartValveProblemsandDisease/Testing-for- Heart-Valve-Problems_UCM_450776_Article.jsp#.V4DVEriLTIU. Accessed July 9, 2016.Heart valve disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart- valve-disease/basics/definition/con-20036065. Accessed July 9, 2016.
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/HeartValveProblemsandDisease/Testing-for- Heart-Valve-Problems_UCM_450776_Article.jsp#.V4DVEriLTIU. Accessed July 9, 2016.